War horta Soomaalidu maxay Kitaabka Allaah u lee-leelinanayaan! Miyaanay muslimiin ahayn? Qofka haddii lagu dhaarin lahaa wax qabiilkiisa wax u dhimaya………….? | Harowo.com
Halkan Riix Si aad u ogaato Beenta Raysul-wasaaraha, kadibna sii dhex-gal cinwaanada kuusoo baxa Waxa maalimihii ina dhaafay, warbaahinta ku soo baxaayay, war Sheegaaya, in ay Fowsiyo ka dhuumatay dhaartii!!! Oo maxay soo kordhinaysaa ama ka bedelaysaa dhaarta ay dhaarataa?! Sow uun lama mid aha Soomaalidaa kale, ee intay Kitaabka ku dhaartaan, hadana aanu waxba ka bedelayn?! Ee isla markiiba jebinaaya ilaalinta, wixii ay ku dhaarteen! Mise Fowsiya ayaa lagu yaqaanaa, in ay ka taqwad iyo cabsi badan tahay, kuwaa la midka ah!!!Si kastaba ha ahaatee, waxay
Posted by haro3468 on Nov 19 2012. Filed under Harowo News - Wadan Iyo Warar.